Louis Van Gaal: isma casilayo - BBC Somali
Louis Van Gaal: isma casilayo
29 Disembar 2015
Image caption Van Gaal, ma jirto sabab aan isu casilo
Tababaraha kooxda Manchester United, Louis van Gaal, ayaa sheegay in uusan is casilaynin kaddib markii ay kooxdiisu barbaro eber iyo eber ah la gashay Chelsea isniintii.
Kooxda United ayaa sideed ciyaarood oo isku xigta ku guul daraysatay in ay badiso marka la eego koobabka xili ciyaareedkan ay ka dheeshay oo dhan, waana markii u horaysay ee ay tan oo kale dhacdo tan iyo 1990 – shan dhibcood ayayna hadda ka hooseeyaan kooxda kaalinta afraad kaga jirta Horyaalka Ingiriiska.
Intii ay Chelsea la ciyaarayeen Juan Mata iyo Anthony Martial ayaa ku sigtay in ay goolal dhaliyaan iyaga oo birta ku dhuftay, iyadoo United ay isbadal muujiyeen.
Van Gaal wuxuu sheegay in aysan jirin sabab uu isu casilo marka ciyaartoydu ay sidan wanaagsan u dheelaan iyaga oo uu culays haysto.
Todobaad adag ayaa soo maray Van Gaal, isaga oo maalmo ka hor saxaafadda ku eedeeyay saadaalinta mustaqbalkiisa isagana baxay shir jaraaid.
Intaas dabadeed United waxaa 2 iyo 0 kaga badisay kooxda Stoke, inta aysan bilaabanin ciyaarta ay Chelsea la lahaayeena banaanka garoonka Old Trafford, waxaa lagu iibinayay maryaha ay taageerayaasha Mancheste United qaataan oo lagu soo sawiray tababarihii hore ee laga eryay shaqada Chelsea Jose Mourinho.